यस्तो छ चिनीको अद्भुत गुण, जुन थाहा पाएर अचम्ममै पर्नुहुनेछ
मानिसहरुले चिया लगाएतमा प्रयोग गर्ने चिनी कसलाई पन पर्दैन होला ? जस्को स्वाद नै एकदमै मिठो हुन्छ । चिनी हामीले चिया कफी, बिभिन्न मिठो खानाको लागी समेत प्रयोग गर्दै आईरहेका छौं । तर तपाईहरुलाई थाहा नहुन सक्छ की यस्ले खानालाई मीठो स्वाद दिलाउने मात्र नभई मानिसको सौन्दर्यमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्छ । यस्तो छ चिनीको अद्भुत गुण :
१. चिनिको प्रयोगले मानिसको पोतो र कालो दागलाई हटाउनु् समेत सहयोग गर्छ । कागतीको रस र चिनी मीसाएर अनुहारमा लगाउनाले अनुहारको पोतो र कालो दागलाई हटाउन सहयोग गर्छ ।
२. चिनिको प्रयोगले अनुहारको चाउरीपन हटाउछ । चिनी, एलोवेरा जेल र दुध मिसाएर लगाए अनुहारको चाउरीपन केहि हद सम्म कम हुन्छ ।
३. घामले डढेको छालालाई समेत चिनि उपयोगी हुन्छ । चिनी, गोलभेंडाको जुस र बेसन मिसाएर प्रयोग गर्नाले अनुहारको घामले डढेको छालालाई राम्रो गर्छ । हप्तामा ३ पटक प्रयोग गर्नुहोस् जसले घामले डढेको छालालाई गोरो र चम्किलो बनाउँछ।
४. चिनिको प्रयोगले कालो ओंठलाई गुलाबी बनाउन समेत मद्धत गर्छ । चिनी, ओलिव ओइल र कागतीको रस मिसाएर ओठमा लगाए यसले कालो ओंठलाई गुलाबी ओठ बनाउन सहयोग गर्छ ।
रुघाखोकी तथा भाइरल ज्वरोको घरेलु उपचारमा प्याज
खादा तीतो भएपनि स्वास्थ्यका लागि अति ला’भदायक ”तिते करेला”, यस्ता छन् फाइदा
कपाल झरेर हैरान हुनुहुन्छ ? पेटसम्बन्धी समस्या हुनसक्छ, खानुस् यी खानेकुरा
मेथीको साग’ मधुमेह र मुटु रोगीका लागि लाभदायक
‘मेथीको साग’ मधुमेह र मुटु रोगीका लागि लाभदायक